समाचार - के तपाईं अल्ट्रासोनिक प्रभाव उपचार बुझ्नुहुन्छ?
के तपाई बुझ्नुहुन्छ? अल्ट्रासोनिक प्रभाव उपचार ?
उच्च आवृत्ति मैकेनिकल प्रभाव (HFMI), अल्ट्रासोनिक प्रभाव उपचार (UIT) पनि भनिन्छ, एक उच्च आवृत्ति वेल्ड प्रभाव उपचार वेल्डेड संरचनाहरूको थकान प्रतिरोध सुधार गर्न डिजाइन गरिएको छ। धेरै औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा यो प्रक्रियालाई अल्ट्रासोनिक पेरिंग (UP) पनि भनिन्छ )।
यो एक चिसो मेकानिकल उपचार हो जसमा यसको त्रिज्याको विस्तार सिर्जना गर्न र बाँकी कम्प्रेसिस्पी तनावहरू शुरू गर्नका निम्ति सुईको साथ वेल्डको औंठी प्रहार गर्नु समावेश छ।
सामान्यतया, देखाइएको आधारभूत यूपी प्रणाली वेल्ड टू वा वेल्ड्स र ठूलो सतह क्षेत्रहरु को उपचार को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि आवश्यक छ भने।
स्वतन्त्र चल स्ट्राइकरहरू
यूपी उपकरण पछिल्लो शताब्दीको's० को दशकमा ज्ञातमा आधारित छ जुन हथौड़ा बन्नका लागि स्वतन्त्र चल स्ट्राइकरहरूको साथ काम गर्ने हेडहरू प्रयोग गर्ने प्राविधिक समाधानहरू हुन्। त्यो समय र पछाडि, स्वतन्त्र चल स्ट्राइकरहरूको प्रयोगमा आधारित विभिन्न उपकरणहरूको नयाँ सामग्री वा वेल्डेड तत्वहरूको प्रभाव उपचारको लागि वायमेटिक र अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेर विकसित गरिएको थियो। अधिक प्रभावकारी असर पार्ने उपचार प्रदान गरिन्छ जब स्ट्राइकरहरू एक्ट्युएटरको सल्लाहमा जडित हुँदैनन् तर एक्टुएटर र उपचार गरिएको सामग्री बीच स्वतन्त्र रूपमा सर्न सक्दछन्। होल्डरमा चढाइएको स्वतन्त्र चल स्ट्राइकरहरूको साथ सामग्री र वेल्डेड तत्त्वहरूको प्रभाव उपचारको लागि उपकरणहरू देखाइन्छ। तथाकथित मध्यवर्ती तत्व-स्ट्राइकर (हरू) को मामलामा सामग्रीको उपचारको लागि केवल --० - N० एनको बल आवश्यक हुन्छ।
सतह प्रभाव उपचारको लागि स्वतन्त्र चल स्ट्राइकरहरूको साथ उपकरणहरू मार्फत अनुभागीय दृश्य।
यसले यूपीका विभिन्न अनुप्रयोगहरूका लागि स्वतन्त्र चल स्ट्राइकरहरूको साथ सजिलो प्रतिस्थापन योग्य हेडिंगको एक मानक सेट देखाउँदछ।
युपीका लागि विनिमय कार्य गर्ने हेडहरूको सेट
अल्ट्रासोनिक उपचारको क्रममा, स्ट्राइकरले अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्यूसरको उपचार र उपचार गरिएको नमूनाको बिचको बीचको सानो फाटोमा ओसिल्याट गर्दछ, उपचार क्षेत्रलाई असर गर्दछ। यस प्रकारको उच्च आवृत्ति आन्दोलन / प्रभावहरू उपचार सामग्रीमा प्रेरित उच्च आवृत्ति दोलनको साथ संयोजनमा सामान्यतया अल्ट्रासोनिक प्रभाव भनिन्छ।
टेक्नोलोजी र अल्ट्रासोनिक पेनि forको लागि उपकरण
अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्यूसर एक उच्च आवृत्तिमा दोहोरो हुन्छ, २०- k० किलोहर्ट्ज विशिष्टको साथ। अल्ट्रासोनिक ट्रान्सड्यूसर या त पाइजोइलेक्ट्रिक वा म्याग्नेटोस्ट्रक्टिभ टेक्नोलोजीमा आधारित हुन सक्छ। जुनसुकै टेक्नोलोजी प्रयोग हुन्छ, ट्रान्सड्यूसरको आउटपुट टुक्रिनेछ, सामान्यतया २० - mm० मिमीको आयामको साथ। दोभाषे समयमा, ट्रान्सड्यूसर टिपले दोहोरो चक्रको विभिन्न चरणमा स्ट्राइकर (हरू) लाई असर गर्दछ। स्ट्राइकर (हरू) ले, बारीमा, उपचार गरिएको सतहमा प्रभाव पार्नेछ। सामग्रीको सतह तहहरूको प्लास्टिक विरूपणमा प्रभाव पार्छ। यी प्रभावहरू, प्रति सेकेन्ड सयौंदेखि हजारौं पटक दोहोरिएका, उपचार सामग्रीमा उत्पन्न उच्च आवृत्ति दोलनको साथ संयुक्त रूपमा यूपीका धेरै लाभदायक प्रभावहरू हुन्छन्।
यूपी हानिकारक टेन्साइल अवशिष्ट तनावबाट छुटकारा पाउन र लाभदायक कम्प्रेस्सिअल अवशिष्ट तनावहरू को सतह तहहरूमा भाग र वेल्डेड तत्त्वहरूको परिचय गराउन एक प्रभावकारी तरीका हो।
थकान सुधारमा लाभदायक प्रभाव मुख्यतया धातु र मिश्र धातुको सतह तहहरूमा संकुचित अवशिष्ट तनावहरू परिचय गरेर, वेल्ड टू जोनमा तनाव एकाग्रतामा कमी र सामग्रीको सतह तहको मेकानिकल गुणहरूको बृद्धि गरेर प्राप्त गर्दछ।
यूपीको औद्योगिक अनुप्रयोग
यूपीले वेल्डेड तत्व र संरचनाहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतको समयमा थकान जीवन सुधारको लागि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्दछ। यूपी टेक्नोलोजी र उपकरणहरू सफलतापूर्वक विभिन्न औद्योगिक परियोजनाहरूमा पुन: स्थापना र भागहरू र वेल्डेड तत्त्वहरूको वेल्ड मर्मतका लागि लागू गरियो। क्षेत्रहरू / उद्योगहरू जहाँ उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक लागू गरियो समावेश गर्दछ: रेलवे र राजमार्ग पुलहरू, निर्माण उपकरण, शिपबिल्डिंग, खनन, मोटर वाहन र एयरोस्पेस।